Fomba Hahazoana ny Bandy Mahita Anao tao amin'ny Club - China Mampiaraka ny Lahatsary amin'ny Chat
Fomba Hahazoana ny Bandy Mahita Anao tao amin’ny Club — China Mampiaraka ny Lahatsary amin’ny Chat
Nahazo ny bandy mahita anao ao amin’ny fikambanana dia mety ho mora raha miasa ianao amin’ny fahazoana vonona voalohany. Manapa-kevitra eo amin’ny fitafiana, ny volo, ary makeup, raha manao izany ianao, amin’ny fotoana be dia be mba ho azo antoka ianao mitady ny tsara indrindra. Ao amin’ny fikambanana, ny dihy sy ny mpanadala mandra-izy mahita anao.
Ity lahatsoratra ity dia niaraha-nanoratra tamin’i ny fiofanana ekipa ny tonian-dahatsoratra sy mpikaroka izay kery izany ho marina sy comprehensiveness. Miara, ireo voatonona-baovao avy amin’ny Nahazo ny bandy mahita anao ao amin’ny fikambanana dia mety ho mora raha miasa ianao amin’ny fahazoana vonona voalohany. Manapa-kevitra eo amin’ny fitafiana, ny volo, ary makeup, raha manao izany ianao, amin’ny fotoana be dia be mba ho azo antoka ianao mitady ny tsara indrindra. Ao amin’ny fikambanana, ny dihy sy ny mpanadala mandra-izy mahita anao.
Avy eo dia miankina aminao
Ataovy azo antoka ianao misafidy ny akanjo izay mandrobo amin’ny vatana karazana. Zavatra iray izay tena mifanaraka dia manan-danja. Na izany aza, raha te-hahazo nahatsikaritra, tsy maninona ny manao akanjo fa ny kely kokoa ny firaisana ara-nofo na manambara. Azonao atao ny manao akanjo kely akaiky kokoa noho ny fomba ara-dalàna, raha toa ianao mahatsiaro ho mahazo aina ny fanaovana izany. Tsy haka ny zavatra izay mampiseho ny zava-drehetra eny fa aza mifidy zavatra izay compliments ny endri-javatra tsara indrindra. Raha tianao ny ambany-manapaka eo aloha, ohatra, tsy mandeha ihany koa ny ambany hanapaka indray. Raha toa ianao mirehareha indray ny hozatra, handeha ho zavatra ambany nanapaka tao indray fa ambony kokoa ny eo anoloana. Ny fitoriana atao ho lehibe club manao, raha toa ka mifidy ny iray izay tsy loatra dressy. Manga fitoriana palitao, ohatra, anaovana tsy mamatotra dia afaka ny ho mahafinaritra club akanjo. Azonao atao ihany koa ny handeha tsotsotra, fa ho azo antoka ny haka zavatra mandrobo. Manify jeans afaka manampy anao seho eny an-tongotra na, raha toa ianao curvier, ny curves. Ny nihamafy ny t-shirt afaka miasa lehibe. Raha te-hanampy ny hanosotra ny mba fombafomba, manao ny tsara blazer nandritra ny manify t-shirt. Manao kiraro ianao fa ny fitiavana. Tsy mahazo aina kiraro fa sarotra ny dihy ao dia tsy ny kiraro ianao te hanao ao amin’ny fikambanana. Mifidiana zavatra izay mandeha tsara amin’ny akanjo sy ny stylish. Ny ankamaroan’ny tarika dia maizina. Ny olona tsy matetika ny mandeha mijery ny tongony. Misafidy kiraro ahazoana aina toy ny koveta na kiraro. Izany dia mamela anao mba handihy flirtatiously, hatao amin’ny lehilahy ny saina. Ataovy ao an-tsaina fa raha ianao mandihy, dininy dia mety. Manao makiazy sy ny ny taovolo izay dia hijanona ao an-toerana amin’ny alina. Ho an’ny makeup, dia mety te hanova ny ara-dalàna antoandro fomba kokoa ny zavatra miavaka kokoa ny loko, smokier, mihoatra hamirapiratra, sns. Raha tsy ianao no tena za-draharaha sy mahay mandihy, manao ny sasany ny toerana tena hira. Manana namana mijery sy manampy anao. Mety hieritreritra ianao mandihy sexily, fa mety jereo fotsiny tsy mahazo aina isika rehetra mila fanampiana kely indraindray. Misy be dia be ny lahatsary an-tserasera izay mety hanampy anao hahalala ireo hetsika tsara indrindra ho anao. Miezaka ny hitandrina ny tena mahamenatra raha ianao mandihy. Raha ianao hanao ezaka mba hamoaka olana, ny mandihy dia mijery voajanahary. Izany dia mety hahatonga anao hijery sexy kokoa, mitombo hery ny lehilahy saina. Rehefa ianao ao amin’ny fikambanana, miezaha tsy ho sahiran-tsaina (na dia mety). Mandihy eo anoloan’ny olona azo kozatra tifitra penalty. Miandry ny hira vitsivitsy alohan’ny hanombohanao sy mijery inona ny olona hafa no manao. Tsy te hiavaka loatra fa ny olona mitsahatra sy ny fotoana. Vao hahalala fomba ianao handeha mba ho antonona eo amin’ny dihy tany. Mety na dia te miandry ny hira ho fantatrao alohan’ny hanombohanao mandihy. Raha toa ianao ka sahiran-tsaina, dihy amin’ny namanao. Miasa amin’ny fahazoana hatoky kokoa, ary mora kokoa nahatsikaritra. Raha toa ianao mahatsiaro ho mafy, dihy amin ny tenanao. Izany dia matetika ny fanasana iray ho an’ny lehilahy iray tonga sy manomboka mandihy miaraka aminao. Na dia misy bandy tsy, ianao afaka ny ho azo antoka fa be dia be ny bandy mahita anareo mandihy amin’ny tenanao. Mariho izay izy no manao izany, fomba mitondra tena, izay izy no zava-pisotro, ary inona no ataony ao amin’ny fikambanana. Ohatra, dia izy tsy mba hiala voly miaraka amin’ny namany, na manao fotsiny izy te haka mety tantaram-pitiavana mpiara-miasa? Mety hilaza ianao be dia be, ary hanampy raha manatona azy. Mety hianatra aminy sy hahatsapa fa izy no any ny manan-danja hafa, noho izany dia mila hetsika eo amin’ny olon-kafa. Raha mahita ny lehilahy amin’ny amin’ny bar, mankanesa any amin’ny trano fisotroana sy hividy zavatra hosotroina. Raha toa ka mivadika, manao masony alohan’ny mitady lavitra. Azonao atao mihitsy aza ny fijery azy miakatra sy midina kosa dia ny mijery ary avy eo dia hanao ny masony ary mitsiky, raha toa ianao mahatsiaro ho sahisahy. Azonao atao ihany koa ny: Ho namana. Raha ianao ny maha-ampahibemaso ny namana amin’ny hafahafa ny lehilahy, dia mety tena tsara ny maka izany ho toy ny flirtation. Mitsiky izy, ary na dia manolotra ny fankasitrahana. Afaka milaza zavatra toy, ‘Hey, tiako ny lobaka. ‘Ny mahazo azy mba hiresaka ny momba ny tenany, ny heviny, sy ny zavatra mahaliana. Ny ankamaroantsika dia tia miresaka momba ny tenantsika. Raha toa ianao tena amin’ny fahaverezana, dia anontanio ny mikasika ny tombokavatsa (raha toa izy ka efa misy mampiseho) na raha toa izy ka efa misy fa tsy. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ireto fanontaniana manaraka ireto: Miezaka ny fiderana. Afaka milaza zavatra toy, ‘mijery ny fanatanjahan-tena. Aza milalao fanatanjahan-tena. ‘Afaka miezaka koa ny zavatra toy, ‘Izay lehibe shirt.
Taiza ianao no hahazo izany
‘? Raha ianao samy miandry am-bar, fanehoan-kevitra ity ny fitokonana ny resaka. Ohatra, milaza zavatra toy, ‘dia Afaka tsy mino ny fomba feno izany. ‘Rehefa avy mamaly, mampahafantatra ny tenanao. Hanontany ny momba azy, rehefa manomboka ny resaka. Mahita zavatra afaka mandinika ny momba azy, ary manontany momba izany ho toy ny fomba mba hiresaka. Ohatra, ny ‘miala Tsiny aho, fa inona no labiera no misotro. ‘Raha vao manana ny lehilahy mpijery amin’ny fitondrantena, ho azo antoka ny mandefa famantarana liana ianao. Noda sy tsiky mba hampisehoana fa mihaino ianareo. Foana ny masony izy rehefa miresaka. Mandoa betsaka ny saina mba mihaino rehefa manao ny miresaka. Raha toa ka miseho ho liana amin’ny olona, ary inona no lazainy, izany dia mety hiseho manadaladala olona. Raha tsikaritrareo ny lehilahy fitia hiverina kely, efa soa aman-tsara nahazo ny sainy. Raha izy mamaly ny masony sy ny filalaovana fitia, tsy maintsy nahazo izy mahita anao. Mety te-hanohy ny filalaovana fitia, ary miresaka na maka izany ny dihy tany. Ankehitriny fa izy no nahatsikaritra ianao, fa miakatra ho any aminareo izay te-handray ny alina avy eto
← Mampiaraka An-Tserasera Shinoa